चलचित्रमा ‘कपी’को मुद्दा
२०७५ चैत ३० शनिबार ०८:५०:००
सन् १९९५–१९९६ मा केही महिनाको अन्तरालमा तीनवटा ठूला हिन्दी चलचित्र रिलिज भए । पहिलो थियो— डेभिड धवन निर्देशित र ऋषि कपुर, माधुरी दीक्षित अभिनीत ‘याराना’ । दोश्रो– अब्वास–मस्तान निर्देशित र जुही चावला र अरबाज खानअभिनीत ‘दरार’ । तेस्रो थियो— पार्थो घोषद्वारा निर्देशित तथा मनीषा कोइराला, नाना पाटेकर र ज्याकी श्राफ अभिनीत ‘अग्निसाक्षी’ । यी तीनै चलचित्र सन् १९९१ मा बनेको जुलिया रोबर्ट अभिनीत हलिउड फिल्म ‘स्लिपिङ विथ दि एनेमी’ बाट हुबहु उतारिएका थिए । यी तीनमध्ये दुई चलचित्र ‘याराना’ र ‘दरार’ बक्स अफिसमा असफल रहे । एउटा ‘अग्निसाक्षी’ले मात्र दर्शकको मन जित्यो । त्यो चलचित्रलाई समीक्षकले पनि रुचाए । त्यसै चलचित्रबाट नाना पाटेकरलाई १९९६ को ‘बेस्ट सपोर्टिङ एक्टर’को राष्ट्रिय अवार्डसमेत दिइयो ।
अब प्रश्न उब्जिन्छ— यी तीनै चलचित्रको कथा–प्लट एउटै थियो भने परिणाम किन फरक–फरक निस्कियो ? यसको सीधा उत्तर हो— चलचित्र विधामा कथा होइन, कथा वाचन गर्ने शैली महत्वपूर्ण हुन्छ । कथा जहाँबाट लिइए पनि कथा भन्ने शैली प्रभावशाली र कलात्मक भएन भने चलचित्रले दर्शकलाई ‘कनेक्ट’ गर्न सक्दैन । चलचित्र सफलताको मूल कडी नै यही हो ।
सन् १९७५ मा माथि उल्लिखित तीन फिल्मभन्दा पनि ठूलो मानिएको एउटा फिल्म रिलिज भएको थियो– ‘शोले’ । जीपी सिप्पीले निर्माण गरेको र उनका भाइ रमेश सिप्पीले निर्देशन गरेको ‘शोले’मा त्यसबेलाका भए भरका स्टारलाई राखिएको थियो । धर्मेन्द्र, अमिताभ बच्चन, सञ्जीव कुमार, हेमा मालिनी, जया भादुरी र अमजाद खानजस्ता कलाकारलाई अभिनय गराइएको ‘शोले’ त्यसबेलासम्मको सबैभन्दा ठूलो बजेटको चलचित्र थियो । यहाँसम्म कि चलचित्र खिच्न क्यामराम्यान र एक्सन डाइरेक्टर समेत हलिउडबाट झिकाइएका थिए । फिल्मलाई सफल बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी राखिएको थिएन ।
तर, विडम्बना ! चलचित्र हेर्न दर्शकहरूको ओइरो भने हलमा लागेन । कारण— यसले रिलिजसँगै थुप्रै आलोचना खेप्नु परेकोे थियो । आलोचनाको मुख्य सार एउटै थियो— यो अंग्रेजी चलचित्र ‘दि म्याग्निफिसेन्ट सेभन’ र ‘सेभन सामुराई’बाट कपी गरिएको थियो । वास्तवमा ‘शोले’ चारवटा फिल्मको रिमेक थियो । आकिरा कुरासावाको ‘सेभन सामुराई’, जोन स्टर्गसको ‘दि म्याग्निफिसेन्ट सेभन’ लाई आधार बनाएर ‘फर अ फ्यु डलर मोर’ र ‘वन्स अपन अ टाइम इन वेस्ट’ जस्ता फिल्मबाट ‘पन्चलाइन’हरू लिइएको थियो । तत्कालीन भारतीय मिडियालाई यो कुरा पटक्कै पाच्य भएन । त्यसपछि त के चाहियो र ! आलोचनाको बमबाडी नै बर्सियो । चलचित्रबारे जताततै नकारात्मक प्रचार हुन थाल्यो । त्यसबेलाका प्रख्यात चलचित्र समीक्षक केएल अम्लाडीले त ‘शोले’लाई ‘डेड एम्बर’ र ‘ए ग्य्राभली फ्लाड एटेम्ट’ अर्थात ‘निभेको आगो’ र ‘गम्भीर त्रुटियुक्त प्रयास’ भनेर कटु आलोचना गर्न भ्याए । त्यस्तै, भारतको सबैभन्दा प्रख्यात सिनेपत्रिका ‘फिल्मफेयर’ पनि यो फिल्मविरुद्ध कडा रूपमा उत्रिएको थियो । ‘फिल्मफेयर’ले समीक्षाको एउटा हरफमा चलचित्रलाई ‘इमिटेशन अफ वेस्टर्न– नाइदर हिएर नर दिएर’ अर्थात् ‘पश्चिमा नक्कल– न यताको न उताको’ भनी तीव्र व्यंग्य प्रहार गरेको थियो ।
यी सबै कुराले कसैलाई असर गरिरहेको थियो भने त्यो भर्खर रिलिज भएको फिल्म ‘शोले’लाई नै थियो । चलचित्र समीक्षाको प्रमुख ‘इस्यु’ नै ‘कपी’लाई यसरी बनाइयो कि जनतामा त्यसै कारणले यो फिल्म हेर्नु हुन्न भन्ने सन्देश जान थाल्यो । चलचित्र राम्ररी चलिरहेको थिएन । रिलिज भएको एक हप्तापछि मात्र हलमा बिस्तारै भीड बढ्न थाल्यो । एक कान दुई कान मैदान हुँदै फिल्मको तारिफ शुरु भयो । दर्शकले समीक्षालाई बहिष्कार गरे र आफूले प्राप्त गर्ने मनोरञ्जनको मुद्दामा चासो दिन थाले । फलस्वरूप ‘शोले’ सुपर डुपर हिट भयो र भारतीय चलचित्रकै इतिहासमा ‘कल्ट’ सिनेमामा पर्न सफल भयो । भारतीयहरुको गर्व बन्यो ‘शोले’ ।
अब पुनः फर्किऊँ ‘दरार’, ‘याराना’ र ‘अग्निसाक्षी’ तर्फ । यतिखेरसम्म आइपुग्दा भारतीय सिने मिडियाहरू धेरै परिपक्व र सिनेमा बुझ्ने भइसकेका थिए । उनीहरूले सिनेमाको प्रस्तुतीकरणमा दम भएन भने कथा वा प्लट मात्रले फिल्मलाई बोक्न सक्दैन भन्ने राम्ररी बुझिसकेका थिए । चलचित्र आफूलाई व्यक्तिगत रूपले मन पर्ने÷नपर्ने भन्दा पनि त्यसले दर्शकलाई ‘कनेक्ट’ गर्छ कि गर्दैन भन्ने ‘इस्यु’मा उनीहरूका समीक्षा केन्द्रित हुन थालिसकेका थिए । चलचित्रको मुटु भनेको कथा वाचन र प्रस्तुतीकरण नै हो भन्ने बुझेरै होला— तत्पश्चात उनीहरूको समीक्षामा कथा कहाँबाट उठाइयो भन्ने कुरा गौण बन्न थाल्यो । समीक्षाको शुरुवातमै फलानो अंग्रेजी चलचित्रबाट लिइएको भन्नेबाहेक अरू अक्षर त्यसबापत खर्च नगरी सीधै चलचित्रका भित्री पक्षको विश्लेषण गर्ने परम्परा शुरुवात भयो । गुगलमा खोज्यो भने अझै पनि माथि उल्लिखित तीनै चलचित्रको समीक्षा भेट्न सकिन्छ । त्यसमध्ये ‘दरार’ र ‘याराना’को समीक्षा नकारात्मक छ भने ‘अग्निसाक्षी’ले तारिफ पाएको छ । रामवीर पुष्प र हृदय लानीले लेखेको १९९६ को सो चलचित्रलाई ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ले ‘टप फाइभ फिल्म अफ दि इयर’ मा रेटिङ गरेको थियो ।
अब कुरा गरौं— हालै रिलिज भएको नेपाली चलचित्र ‘लभ स्टेसन’ को । यो फिल्मलाई ट्रेलर सार्वजनिक भएदेखि नै विवादमा तानिएको थियो । कारण उही थियो– ‘कपी’ । चलचित्र रिलिज भएपछि त झन् के चाहियो र ! चौतर्फी आलोचना खेप्नुप¥यो यसका लेखक, निर्देशक र निर्माताले । ‘शोले’ जस्तो ‘लभ स्टेसन’ले भने समीक्षा र आलोचनाका कारण दर्शकको अभाव झेल्नु परेन । यसले गर्ने व्यापारमा खासै कमी आएन तर ‘कपी’लाई मात्र यति ठूलो इस्यु बनाइयो, मानौं त्यो चलचित्र नभएर ‘वाटरगेट’ जस्तै एउटा काण्ड थियो र त्यो पत्ता लगाउने फिल्मी पण्डितहरू केहीबेरका लागि भए पनि ‘इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिज्म’को आत्मरतिमा रमाउन भ्याए । ‘लभ स्टेशन’को कथा वाचन, कलाकारहरूको अभिनय, दृश्य संयोजन, क्यामरा वर्क, लोकेसन, छनोट आदि राम्रा पक्ष सबैलाई ‘कपी’को कुरा तेर्साएर बेवास्ता गर्न खोजियो । यो चलचित्रलाई उज्ज्वल घिमिरेले निर्देशन गरेका हुन् । उनीसँग थुप्रै सुपरहिट फिल्म बनाएर दर्शकलाई मनोरञ्जन दिएको अनुभव छ । एउटा पुराना र अनुभवी निर्देशकले निर्देशन गरेको यो चलचित्र रत्तिभर लायक नहुँदो हो त चल्दै नचल्नु पर्ने थियो । समीक्षकबाट राम्रो समीक्षा पाएका समकालीन चलचित्रहरू ‘खाग’, ‘बुलबुल’ र ‘प्रसाद’ भन्दा ‘लभ स्टेसन’ले गरेको व्यापार तुलनात्मक रूपले राम्रो भएन र ? दर्शकले दिएको ‘भोट’लाई अवमूल्यन गर्ने अधिकार कसैमा रहँदैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । भन्नै पर्ने हुन्छ— हाम्रा केही चलचित्र पत्रकार र समीक्षकहरू अझै ‘शोले’ युगबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्, बडो दुःखलाग्दो कुरा । नेपाली चलचित्रमा नयाँपन खोज्नले आफ्नो समीक्षामा नयाँ डाइमेन्सन कहिले ल्याउने हो, हेर्न बाँकी छ ।
यो लेखको उद्देश्य चलचित्र कपी गरेरै बन्नुपर्छ भन्ने कदापी होइन । ‘कपी’ गर्नेहरूको ‘एड्भोकेसी’ गर्न पनि यो लेख लेखिएको हैन । चलचित्रको समीक्षा गर्दा ‘कपी’ मात्रलाई आधार बनाइन हुन्न भन्ने आजको मान्यता कायम होस् भन्ने मात्र हो । ‘कपी’को आवाज चर्को पारेर अरु सबै राम्रा पक्षलाई अन्धकारमा राखिदिनु चाहिँ अन्याय हो । चलचित्रका सबै पक्षले बराबर ‘वेटेज’ पाउनुपर्छ र दर्शकलाई निर्णय गर्न दिइनुपर्छ । किनभने, दर्शक भनेको अन्तिम निर्णयकर्ता हुन् । दर्शक गलत हुन सक्दैनन् ।
तपाईंहरूलाई सुन्दा आश्चर्य लाग्ला— विश्वप्रख्यात चलचित्र निर्देशक स्टेभेन स्पिलबर्गले जोन फोर्डको ‘दि सर्चर्स’का केही दृश्य र फ्रेमिङलाई आफ्नो चलचित्र ‘दि कलर पर्पल’मा राखेका थिए । हङकङको फिल्म ‘इन्टरनल अफेयर’बाट प्रभावित भई त्यसको रिमेक गरेर मार्लिन स्कोरसेसले सन् २००६ मा ‘दि डिपार्टेड’ बनाए । सो चलचित्रले बक्स अफिसमा मात्र होइन, ओस्कारमा पनि तहल्का मच्चाएर सर्वोत्कृष्ट चलचित्र, सर्वोत्कृष्ट निर्देशकसहित अरु चारवटा एकाडेमी अवार्ड जित्न सफल भएको थियो ।
हिन्दी चलचित्रहरूले नेपालबाट बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ लैजाने गर्छन् । विडम्बना के छ भने नेपाली चलचित्रलाई कपी भयो भनी सत्तोसराप गर्नेहरूले हलिउडको हिन्दी भर्सनलाई भने स्वीकार्ने मात्र होइन, तारिफ नै गर्ने गर्छन् । उनीहरू ‘शोले’को बयान गरेरै थाक्दैनन् । सन् १९९८ मा अजय देवगणको एउटा फिल्म ‘प्यार तो होना ही था’ले नेपालबाट मात्र भारु १ करोड लगेको थियो । सो चलचित्र हलिउड फिल्म ‘फ्रेन्च किस’को हिन्दी अनुवाद थियो । तर, त्यस विषयमा नेपाली मिडियाले एक अक्षर पनि खर्च गर्न आवश्यक ठानेन । त्यस्तै ‘मिस्टर विन’ सिरिज र हलिउड फिल्म ‘इट्स अ म्याडम्यान वल्र्ड’बाट उतारिएको फिल्म ‘धमाल’ नेपालमा सुपर हिट भएको थियो । आमिर खान, मनीषा कोइरालाअभिनीत चलचित्र ‘अकेले हम अकेले तुम’ हलिउड चलचित्र ‘क्रेमर भर्सेस क्रेमर’को हिन्दी अनुवाद थियो । अजय देवगणको सन् २००८ मा निर्मित ‘यु मी और हम’ हलिउडको ‘नोटबुक’को हिन्दी भर्सन थियो । त्यस्तै, अजय देवगणकै २०१६ को फिल्म ‘शिवाय’ हलिउड ब्लकबस्टर ‘टेकेन’बाट नउतारिएको भए ‘हम तुम’ भन्ने चलचित्र ‘ह्वेन हेरी मेट शेली’बाट नलिएको भए र ‘मुन्नाभाइ एमबीबीएस’ रोवर्टस विलियमको हलिउड फिल्म ‘प्याच एडम्स’ बाट साभार नगरेको भए हामीले हिन्दी फिल्ममा ताली बजाउन कहाँ पाउँथ्यौं र ? तालीमात्र बजाएनौं, नेपालीको करोडौ रुपैयाँ भारत पठायौं । ‘कपी’ मा त्यति धेरै टाउको दुखाइ थियो भने हामीले ‘कपी’ हिन्दी फिल्मलाई चाहिँ प्रोत्साहन किन ग¥यौं ? सीधै हलिउडको ‘ओरिजिनल’ फिल्म हेर्ने वातावरण सिर्जना गर्न किन सकेनौं ? नेपालबाट करोडौं रुपैयाँ लग्ने भारतीय ‘कपी’ फिल्मका विषयमा दुई अक्षर खर्च गर्न नसक्ने केही सिने पण्डितलाई नेपाली चलचित्रको विषयमा कत्रो चिन्ता ! नेपाली चलचित्र नेपालमै बन्छन् र नेपालमै चल्छन् । सानो बजारमा चलेका नेपाली चलचित्रमा त्यसका निर्देशक र लेखकको मात्र होइन, सयौं नयाँ प्रतिभा र प्राविधिकको भाग्य जोडिएको हुन्छ । त्यस्तो ‘भल्नरेवल’ विधालाई समीक्षा गर्दा मूल्यांकनका बाँकी सूत्रहरूको बेवास्ता गर्दै एउटै मात्र कारण तेस्र्याएर चलचित्रको बदनाम गर्न तम्सिने प्रवृत्तिलाई समीक्षा होइन, नायक प्रदीप खड्काले भनेजस्तै ‘आक्रमण’ नै मान्नुपर्छ ।
वर्षौं पहिले एउटा नेपाली चलचित्र खुब चलेको थियो— ‘कुसुमे रुमाल’ । तुलसी घिमिरेद्वारा निर्देशित सो चलचित्रलाई सबैले मन पराए । तर, धेरै कमलाई थाहा होला त्यो चलचित्रको कथा–प्लट सुपरहिट हिन्दी चलचित्र ‘मिलन’बाट लिइएको थियो । त्यस्तै भुवन केसीको ‘करोडपति’ पाकिस्तानी चलचित्र ‘दिल्लगी’ बाट र उज्ज्वल घिमिरेको ‘जिन्दगानी’ पुरानो हिन्दी फिल्म ‘धर्ती कहे पुकारके’बाट प्रभावित थिए । यो कुराको हेक्का तत्कालीन सिनेपत्रकार र समीक्षकलाई नभएको पनि होइन तर उनीहरूले यसलाई ‘इस्यु’ बनाउन चाहेनन् । कारण— ती चलचित्र राम्रा थिए र दर्शकको मन जित्न सफल भएका थिए । चलचित्रको मूल धर्म भनेको मनोरञ्जन हो र त्यसलाई ‘इग्नोर’ गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा उनीहरूले राम्ररी बुझेका थिए त्यस बेला ।
दुःखलाग्दो कुरा छ— देशमै व्याप्त ‘राम्रो होइन, हाम्रो मान्छे’ प्रवृत्ति नेपाली चलचित्र क्षेत्रबाट पनि टाढा रहन सकेन । आफ्ना साथीभाइले बनाएका चलचित्रलाई मात्र मिडियाले ठाउँ दिने र एकतर्फी समीक्षा गरिदिने गर्दा यसमा विकृति देखिन थालिसकेको छ । होइन भने गोविन्द शाहीको ‘लभ स्टेसन’लाई ‘कपी’ देख्नेले भुवन केसीको ‘ड्रिम्स’लाई बेलायती फिल्म ‘इफ वन्ली’को ‘कपी’ देखेनछन् ? सुदर्शन थापाको ‘मेरो एउटा साथी छ’लाई ‘मिलियनर्स फस्ट लभ’ भनेर समीक्षा गरेको त पाइएन त्यस बेला । त्यस्तै, हिन्दी फिल्म ‘रमैया वस्ता वैया’को हुबहु ‘बाँध मायाले’ होइन र ? अनि भुवन केसीकै ‘क्याप्टेन’ लाई चाहिँ ‘पेलेः बर्थ अफ लिजेन्ड’बाट टाढा राख्न मिल्थ्यो त ? थाहा पाएर होस् या थाहा नपाएर— त्यस विषयमा कसैले बोलेनन्, राम्रो भयो । ती चलचित्रको बाँकी समीक्षा भयो, त्यसमा आपत्ति रहेन । आपत्ति एउटै कुरामा रह्यो— किन ‘लभ स्टेसन’ मात्र ? यहाँनिर शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त दिइयो । कुनै व्यक्तिगत रिस, राग, कुण्ठा र इगोको कारणले एउटा सामूहिक सिर्जनशील उत्पादन प्रताडित हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।